ရန်ကုန်ရှိ ဦးကျော်မိုးထွန်း ဖခင်၏ နေအိမ်ကို စစ်ကောင်စီက ချိတ်ပိတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်က ဟားဗတ်ဘွဲ့ရ ဒေါက်တာ အတု
ကျနော့်စိတ်ထဲ အိမ်မက်တွေထဲ ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့ ဇာတ်ကြောင်း။ ပြီးတော့ ဒီနေ့ထိ ပြောစမှတ်ပြုနေရဆဲ ဆိုးရွားတဲ့ အတွေ့အကြုံတခု။
တကယ်တော့ အမေ့ကို ဖက်ထားချင်တဲ့စိတ်ပေါ့၊ အဖက်ခံထားချင်တဲ့စိတ်မျိုးလို့ ထင်တာပဲ။ အဲ့ဒီလိုမျိုး။ ဒီနိုင်ငံ၊ ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကျ အံမဝင်တော့... "ဟ ဒီကောင် ဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေပြီ" အစချီပြီး ပြောကြမှာ။ မြင်ရတာလည်း သိပ် ဘဝင်ကျချင်စရာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ICJ အနိုင်အရှုံးနဲ့ မွတ်စလင်တို့ရဲ့ အကြောက်တရား
အစွန်းနှစ်ဖက်မျှတစွာနဲ့ ရေရှည်အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရေးကို ရှေးရှုတဲ့ မွတ်စလင်တွေကတော့ လာမယ့်နေ့ရက်တွေကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ဆီက ဟိုအရေး၊ ဒီအရေး ဆောင်ရွက်နေသူ အတော်များများဟာ နိုင်ငံရပ်ခြား အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သမုတ်ပေးမှု၊ မြှောက်ပေးမှုကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူတန်းစား တခုခု၊ လှုပ်ရှားမှုတခုခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ ရှေ့ဆောင်ဦးရွက်ပြုသူ စသဖြင့် သူတပါးကပ်ပေးတဲ့ တံဆိပ်တခုအောက်....
ကျနော် သူ့ကဗျာတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တာပါ။ ကဗျာရေးဖြစ်ဖို့နဲ့ လူတွေကို ချစ်တတ်ဖို့၊ ကျေးလက်နဲ့ သဘာဝကို ချစ်ဖို့နဲ့ ရိုးသားဖို့အတွက် သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ ဒီ Podcast နဲ့ ကျနော် ဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်။
တချို့ယောက်ျားတွေဟာ အသည်းကွဲတဲ့အချိန်တွေမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ဓမ္မတာလာချိန်မှာလိုမျိုးပေါ့။
ကျနော်တို့ ချစ်ရတဲ့အရာတွေ ကွယ်ပျောက်သွားကြလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ သိပ်ခံစားကြရပါတယ်။ သက်ရှိဖြစ်ဖြစ်၊ သက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ဘီယာဆိုင်ကလေးတဆိုင် ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်း ပြောပြချင်တယ်။
ကျနော်တို့ အရင်ထက် ပိုလိမ္မာလာကြသလား
လူတွေဟာ ဘိုးဘေးတွေရဲ့ ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေ၊ ဘာသာတရားတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့အတူ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကောင်းအောင်နေထိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကို သင်ခန်းစာယူရင်း အနာဂါတ်ကို ပိုလှအောင်ဖန်တီးကြတယ်ပေါ့။ ဒီတိုင်းသာဆိုရင် လူတွေဟာ အရင်ထက်ပိုပြီး လိမ္မာလာစရာရှိပါတယ်။ တကယ်ရော ဟုတ်သလား...?
မြို့သားနဲ့တောသားပြဿနာအစနဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုဂျင်းထည့်ခဲ့ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲ...?
မွတ်စလင်တွေအကြောင်း ဘာကြောင့် ရေးရသလဲ
အနေဝေးရင် သံသယများပါတယ်။ စကားမပြောဖြစ်ရင် နားလည်မှု မရှိနိုင်ပါဘူး။ သံသယဆိုတာ ပြဿနာဖြစ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး လမ်းစ (မီးစ) လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
မီဒီယာတခု ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး၊ ဘက်လိုက်တယ် မလိုက်ဘူးဆိုတာကို စာဖတ်သူတွေသာ ဆုံးဖြတ်တာပါ။ ကိုယ်ဘာသာလိုက်ပြီး "ငါတို့မီဒီယာ ဘက်မလိုက်ဘူးကွ" လို့ ပြောနေလို့ မရပါဘူး။ အစိုးရကလည်း ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်သလို မီဒီယာအချင်းချင်းလည်း "တံဆိပ်ကပ်" ပေးလို့ မရပါဘူး။
လစ်ဘရယ်တွေ နိဂုံးချုပ်ပြီးလားဆိုပြီး CNN ရဲ့ နာမည်ကျော် ဖာရိ ဇာခါရီးယားနဲ့ အတူ စကားစစ်ထိုးပွဲတွေ လုပ်ပြီးတဲ့နောက် ဗြိတိသျှသား သမိုင်းပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုုုံးသပ်သူ နီးလ် ဖာဂူဆန် တယောက်ပြောလာတာက ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်လာသလား ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါပဲ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက် ဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်ကို ဦးတည်နေသလဲ
မောင်တောပြဿနာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း တောက်လျှောက် စောင့်ကြည့်မိတဲ့အထဲမှာ ဥပရောပသမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အသံပါပဲ။ ခုတော့ EU ဆီက အသံတခု ထွက်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ တတိယနိုင်ငံတွေမှာ "ရိုဟင်ဂျာ" တွေကို နေရာချထားပေးဖို့ဆိုတာ အင်မတန် ခက်ခဲ ပါသတဲ့။
အာဆာရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်မှု၊ ဒေါက်တာအေးမောင် ပြဿနာ၊ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ တပ်မတော်/အစိုးရကြား ဆက်ဆံရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာ၊ တည်ငြိမ်နေပြီထင်ရပေမယ့် တအုံနွေးနွေးရှိနေတဲ့ ရခိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားက ပြဿနာတွေဟာ ...
ခင်မင်ရတဲ့ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ်ရေပန်းစားတဲ့ အယူအဆလေးတခုအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါက “အမျိုးသမီးတွေဟာ ကြိုက်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်မယ်၊ ဒီလိုဝတ်တာကြောင့် လိင်ဆွဲဆောင်တယ်၊ မုဒိန်းအားပေးတယ်ဆိုတာ မှားတယ် ...